Saraakiisha SSC Oo Ka Hadlay Dagaal Dhexmaray SSC Iyo Somaliland Iyo Hadalkii Ka Soo Yeeray Somaliland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Saraakiisha SSC Oo Ka Hadlay Dagaal Dhexmaray SSC Iyo Somaliland Iyo Hadalkii Ka Soo Yeeray Somaliland
Col.Yaasiin Cali Cabdule oo ka mid ah Saraakiisha ugu sareysa SSC oo u waramayay Horseed Media isagoo ku sugan gobolka Cayn ayaa war aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay hadal ka soo yeeray Wasiirka arimaha dibada maamulka Somaliland Cabdulaahi Maxamed Ducaale,kaasi oo ahaa in Ururka SSC ay yihiin “Argagagixiso”.
Maqal waraysi Horseed Media la yeelatay Col Yaasiin Tamaad [powerpress]
Mudane Yaasiin ayaa sheegay in meel ka dhac ay tahay in Wasiirka arimaha dibada Somaliland uu sidaasi u hadlo,waxaana uu xusay in Ururka SSC aysan ahayn dad ku soo duulay degan aysan lahayn.
“…Argagaxiso waxaan u aqaan kacan diid,xiligi Maxamed Siyaad uu dalka ka ariminayay ayaa cidii kacaanka ka soo horjeesata la dhihi jiray waa argagixiso,Xagla Toosiye ma aha argagixiso ee waa muwaadin u dagaalamaya dalkiisa…”.
Mar uu ka jawaabayay hadal uu sheegay Wasiirka arimaha dibada ee Somaliland oo ahaa in SSC arimaheeda ay kala xirriri doonaan Dowladda Federaalka ayaa waxaa u sheegay in aysan jirin meel ay ku qoran tahay degaan aan qabsaday ayaan kala hadlayaa DFKM ah.
Wuxuuna intaa raaciyey in Somaliland ay u muuqanayso mid ictiraaftay DFKM ah,waxaana uu kula taliyay in Somaliland ay la midowdo Soomaaliya.
Dagaal dhexmaray SSC iyo Somaliland
Col Yaasiin ayaa sheegay in dagaal u dhaxeeyay ururka SSC iyo Somaliland uu 48 saac ee ugu dambaysay uu ka dhacay degaanka Bali Halac ee gobolka Cayn,dagaalkaasi ayaa waxaa uu sheegay in uu yimi ka dib markii Ciidanka Somaliland ay degankaasi qabsadeen isla markaasina ay ka gaysteen wax yaabo bini’aadanimada ka dhan ah.
Wuxuu xusay in dagaalkaasi ay khasaaro ba’an ugu gaysteen ciidamada Somaliland/
“…Waxaan ka dilnay dhow askari,waxaana aan ka dhaawacnay ciidamo fara badan.anagana xagayaga dhaawaca ayaa jira…”, ayuu yiri.
Col.Yasiin ayaa sidoo kale sheegay in Bali harac ay waqtigan gacanta ku hayaan Ururka SSC isagoo xusay ciidamada Somaliland ay dib ugu riixeen deegaanka Dhamasaar.
Ugu dambayntii waxaa uu sheegay Col.Tamaad in ay qaadi doonaan dagaal ay ku doonayaan in ay kula wareegan deegaanada uu bartilmaameedkoodu yahay.